Ụbọchị My Pet » Gịnị gị Anu ulo Banyere Gị
emelitere ikpeazụ: Ka. 28 2020 | 3 min agụ
Dị ka ya ma ọ bụ, ụzọ anyị na-ebi ndụ na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ndị dị iche iche na-emenye mmadụ anyị. Dị ka ọmụmaatụ, onye lezie n'ebe ọrụ ga na-ejikarị nwere ubé ọzọ isiike anya kwupụta ndụ na a propensity maka ịchọkarị izu okè na. N'akụkụ aka nke ọzọ, ị nwere ike nta ka ọ bụrụ ụfọdụ na-arụkọ ọrụ ndị bịara ọrụ na tomato kechoopu na ya uwe elu uwe ghara ịbụ a nnọọ anya onye. N'ezie, nke a ekwesịghị ịbụ a barometer nke a onye n'ozuzu àgwà. Otú ọ dị, ha bụ ndị a dị mma nke na-egosi otú mmadụ ga-n'ozuzu aghọta ndụ. Na ndọtị nke a, ndị na-ahọrọ dị iche iche ụmụ anụmanụ dị ka anu ulo ga-ejikari ịkekọrịta ụfọdụ e ji mara.
The ozi ọma bụ na nkịta nwe bụ oké n'anya, na-ekpo ọkụ hearted na akanamde. Ka emechara, nkịta mkpa ka a na-elekọta. Ọ bụrụ na gị na onye òtù ọlụlụ bụ nkịta onye, e nwere nnọọ elu ohere na ha na-ọzọ mmetụta ịhụnanya na mmekọrịta. Dog hụrụ ga-abụ ihe ọrụ nanị n'ihi na nkịta na mgbe niile na-achọ a otutu anya dị ka nke ọma. Otu ihe ọma banyere nkịta nwe bụ eziokwu na ọtụtụ ugboro, ha ndị kasị pụrụ ịdabere na-eme ihe n'eziokwu nke otutu.
Nwamba na a mara na-adị nnọọ aloof gburugburu ndị na. Otú ọ dị, ha na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ kemgwucha e kere eke na n'ezie na-achọsi ịhụnanya. Cat nwe-egosi yiri e ji mara. Ha na-ukwuu mmasị ha anu ulo na n'ezie-enwe obi ụtọ etiti nke uche (ọ bụ ezie na ha nwere ike na-egosi na nke a). Ihe bụ isi na-akpa a cat nwe bụ site n'igosi otu ego nke anya na-amata mmetụta ha.
N'ezie, e nwere ọtụtụ ihe arụmụka banyere ma ọ bụ n'ezie ikike na-a nnụnụ dị ka a anụ ụlọ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-nweta gburugburu ya site ewu nnụnụ cages ha ubi na enye ha nnụnụ nnwere onwe na-akpagharị banyere ka ha na-eme. Nnụnụ nwe ndụ ndụ ha otu ụbọchị n'oge na dị ka ndị dị otú ahụ, na-na-na-achọta na-abụghị conformist ntọala. Ha na-agbasaghị inwe ihe okike na adventurous.
Azụ dị ka anu ulo na dị ka nso na-abụghị ndụ akpọkwa dị ka a Pita nwere ike ịbụ. Chọpụta, ọ dị oké na-ekiri azụ igwu mmiri na azụ efere ma ọ bụ tank. Otú ọ dị, otu onye anaghị n'ezie ga-esi ọtụtụ abụọ na-ụzọ mmekọrịta na azụ. Ndị mmadụ na-enwe na-azụ dị ka anu ulo na-emekarị jụụ karịa ọtụtụ. Otú ọ dị, Ha na-akakwa mma karịa ndị ọzọ na-n'ozuzu bụghị banyere ot ọha norms.
Rabbits, hamsters na nchọpụta mmiri
Ụmụ anụmanụ ndị a na-ejikari ọzọ kwadoro na-eto eto na ụmụaka na-eto eto. N'ezie, e nwekwara a ọnụ ọgụgụ nke ndị toworo eto na-obere, furry e kere eke dị ka anu ulo. Ndị a bụ ndị na-adịkarị ndị na-eme obi ụtọ nke mmegwara mmekọrịta ma na-achọsi nwalee n'ala mbụ na okwu nke anu ulo. Ha na-ekpo ọkụ na ịhụnanya a ọchịchọ kwupụta ọrụ. Ndị a Pita hụrụ bụ fun ịhụnanya na kemmeochi.
Gịnị banyere ndị na-adịghị enwe anu ulo n'ụlọ? Ma ọ bụ ọbụna ndị na-adịghị azọrọ na ọ bụla ịhụnanya maka anụmanụ? Na nke a atụ, ọ maa apụtaghị na ha bụ ndị oyi na-atụ hearted ma ọ bụ na-adịghị na ahịa n'anya mmekọrịta. Ọnọdụ ekere òkè dị mkpa na-ekpebi ma onye ga-abụ ihe njikere karịa ndị ọzọ aka a Pita. Non-Pita nwe nwekwara ike ịbụ oké-eguzosi ike n'ihe, ọrụ ma na-elekọta!
Na a nutshell, ọ bụ nnọọ ike ịbụ na ị ga-abịa gafee a Pita nwe onye nwere onye ọ bụla nke àgwà a kọwara n'elu. Nke a bụ enweghị definitive ndepụta nke àgwà dị ka ụdị nke anụmanụ na otu hụrụ. Otú ọ dị, ezuru nnyocha e duziri na-egosi na e nwere a n'ozuzu otutu mmadu kwenyere na àgwà na àgwà onye ọ bụla anụ n'anya yiri ka enweta. N'agbanyeghị nke Pita na-na-n'ụlọ, a mmekọrịta ka bụ nchikota nke abụọ hà akụkụ n'etiti abụọ kwara ndị.
Olee otú Mkpapụ onye si Dog Park
5 Ihe a Wingwoman ka Cheta